Habka hal-abuurka ee Valheim | Liiska dhammaan amarrada Valheim
Inicio/ciyaaraha/Sidee looga dhaqaajiyaa habka hal abuurka ee Valheim? [Fudud]
0 612 6 daqiiqo akhri
Valheim waa mid ka mid ah ciyaaraha moodada ah dad badana waxay bilaabayaan quudintooda ciyaartan xiisaha badan maalin kasta. Laakiin maanta waxaan haynaa sheeko cusub, waana taas waxaan ku tusi doonnaa sida loo kiciyo habka hal-abuurka ee Valheim. Tani waxay ku habboon tahay dadka hadda bilaabaya ama kuwa jecel inay dhisaan dhismooyin waaweyn. Marka akhri si aad u barato sida loogu kiciyo habka konsol ee Valheim.
Waxa ugu horreeya ee aan sheegi karno waa muhiim, waana in kastoo aad beddesho luuqadda ciyaarta, mid kasta oo ka mid ah amarrada aad soo gasho waa inuu had iyo jeer ku ahaadaa Ingiriisi. Sababtuna waa barnaamijka ciyaarta wuxuu ku jiraa luqaddan waana mida kaliya ee lagu aqoonsan doono.
Waxaa jira amarro badan oo kala duwan oo ku yaal Valheim, iyo barashada sida loo kiciyo Moodalka Hal-abuurka waxaad awood u yeelan doontaa inaad mid kasta oo ka mid ah isticmaasho. Tani waa waxa aan arki doonno:
1 Amarada Guud ee Valheim
1.1 Amarada Astaamaha ee Valheim
1.2 Baadh amarrada
1.3 Amarada dhacdada
1.4 Liiska amarka cuntada
1.5 Qalabka Qiimaynta Qalabka
1.6 Kumaandooska hubka ee Valheim
1.7 Amarada Qalabka ee Valheim
1.8 Dhammaan gawaarida Valeim
1.9 Amarada Cadawga ee Valheim
1.9.1 Cadawga ayaa dhashay
1.9.2 Amarada Koobka Cadowga
1.10 Waan jeclahay tan:
Si aad udhaqaajiso qaabka konsol ee Valheim kaliya waa inaad riixdaa furaha F5 ee kumbuyuutarkaagaTani waxay u oggolaan doontaa qaabka hal-abuurka ah ee ciyaarta in la hawlgeliyo. Si kastaba ha noqotee, tani waxay na siin doontaa marin xaddidan qaababka ciyaarta.
Si aan u dhaqaajino dhammaan amarrada waa inaan ku galnaa ereyga sanduuqa qunsulka "Imacheater" ka dibna riix Ku qor si loo kiciyo habka hal-abuurka ee Valheim.
Waa in la ogaadaa in qaabka ciyaartan aan laga heli karin server-yada la wadaago ee Valheim., kaliya qaab kali ah. Caqli ahaan, tan ayaa looga hortagayaa ciyaartoy qaar inay adeegsadaan amarradan si ay uga faa'iideystaan ​​ciyaartoy kale.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad wax u barato soo dejiso Rocket League Sideswipe bilaash
Hadda waxaan kaaga tagi doonnaa amarrada aad awoodi doontid inaad adeegsato markaad ogaato sida loo kiciyo habka hal-abuurka ee Valheim.
Amarada Guud ee Valheim
Ilaah: dhaqaajiso ama ka jooji qaabka Ilaah inuu noqdo mid aan laga adkaan karin;
Ruuxu: dhaqaajiso ama jooji qaabka cirfiidka, sameynta cadawgu kuma arki doonaan;
Xadgudub: awood u siiya ama joojiya isticmaalka kamaradda bilaashka ah ee ka baxsan dabeecada;
Ffsmooth 1: wuxuu kudarsadaa dhaqdhaqaaq xariif ah dhaqdhaqaaqa kamarada bilaashka ah;
Ffsmooth 0: dib u deji goobaha ruxruxida kamarada qaabka bilaashka ah;
Debugmode: awood u siiya ama gab habka hal-abuurka;
B: awood u yeesho ama joojiso shuruudaha dhismaha, sida ilaha ama kuraasta shaqada;
Z: waxay awood u siineysaa ama joojineysaa howlaha duulimaadka (baarka hawada sare ayaa naga dhigaya inaan kor u kacno, badhanka Carl ayaa naga dhigaya inaan hoos u degno);
K: Ka tirtir dhammaan cadawga iyo makhluuqa ku jira aragtida astaamaha;
saarayaasha ka qaad dhammaan walxaha aan la qaadin.
Kuwani waa dhammaan amarrada guud ee aad isticmaali karto markaad karti u yeeleyso ama aad kicineyso habka hal-abuurka ama qaabka qunsuliyadda ee Valheim. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwo kale oo badan, kuwaas oo loogu talagalay shaqooyinka horumarsan.
Waxaan sidoo kale kaa tagi doonnaa liistadaas amarka oo dhammaystiran maaddaama yoolkeennu yahay inaan ku siinno alaabada oo dhammaystiran, si markaa aad sidan ugu noqon kartid sayidka ciyaarta.
Amarada Astaamaha ee Valheim
Raisekill: wuxuu kordhiyaa heerka xirfad dhowr heerar oo u dhigma qiimaha la galay;
Resetskill: cadeeyaa horumarka xirfada;
Abuurista: u cadee dhamaan horumarka ciyaaryahan;
Timaha: wuxuu si joogto ah u tirtirayaa timaha astaamaha;
Gadhka: garka si joogto ah u tirtira;
Qaabka [0/1]: u beddelo qaabkaaga dabeecadda u dhexeeya lab iyo dheddig siday u kala horreeyaan.
Dhamaan amarradan waxaa loogu talagalay ka-habeynta ciyaartoyda marka la eego dhinacyada jireed qaarkood. Waxaad awoodi doontaa inaad wax ka beddesho awoodaha iyo horumarka jilayaasha. Ku sii wadista liiska dhammaan amarrada Valheim waxaan kuu daayey amarrada sahaminta.
Sahamin: soo hel khariidada oo dhan;
Dib-u-dejinta: wuxuu tirtirayaa horumarka laga baaray khariidada ciyaarta;
Pos: waxay muujineysaa iskuduwaha goobta hadda jilaaga;
Goto [x, z]: wuxuu telefishanka ugu diraa iskuduwaha cayiman;
Location: dhig goobta sida barta ciyaartooyga;
Killall: disho dhamaan cadawga kuu dhow;
Rabitaan: nabar dhammaan xayawaannada u dhow;
Dabayl [xagal] [xoojin]: waxay hagaajisaa jihada iyo xooga dabaysha;
Dib u deji: resets qiyamka dabaysha otomaatig ah.
Amarada kor ku xusan waxay faa'iido u leeyihiin inay awoodaan inay si faahfaahsan u maareeyaan goobaha astaamaha, tan si wanaagsan loo adeegsaday waxay noqon kartaa mid ka mid ah howlaha ugu faa iidada badan habka hal-abuurka ee Valheim. Hadda waxaan sii wadaynaa liiska amarrada dhacdooyinka, kuwaas oo ah kuwa ugu isticmaalka badan.
Randomevent: bilaw dhacdo "duulaan" aan kala sooc lahayn;
Joojinta: wuxuu joojiyaa dhacdada dhow ee socda;
Tod [0-1]: dejiso waqtiga maalinta, labadaba qiimayaasha 0 iyo 1 waxay ku qasbi doonaan qorrax-soo-baxa iyo qorrax dhaca, halka 0.5 ay qasbi doonaan duhurkii;
Tod -1: waxay dib u dejisaa waqtiga maalinta illaa ugu dambeyn
Ka-badhitaan [ilbiriqsiyo]: horay u sii wad waqti waqti ah ciyaarta gudaheeda;
Hurdada: Sii socod maalin buuxda ciyaarta.
Hadda waxaan kaaga tagi doonnaa liis aad u muhiim ah oo amarro ah oo ku saabsan habka hal-abuurka ee Valheim waana inay awood u yeelato inay walxaha ka dhex muuqdaan kaydkeenna. Waxaa xusid mudan in si ay u shaqeyso waa inaan qornaa amarka muuqaalka oo ay ku xigto curiyaha aan dooneyno iyo qaddarka. Tusaale ahaan: "Spawn Bread 40" oo kuu oggolaan doonta inaad muuqato 40 cutub oo rooti ah.
Liiska amarka cuntada
Hilib la kariyey
Kalluunka la kariyey
Kuwani waa dhammaan cuntooyinka aad ka heli kartid ciyaarta isla markaana aad ka dhigi kartid muuqaal ka mid ah qaabka konsole ee Valheim. Laakiin dhinac kale oo muhiim ah oo ka mid ah habkaan ciyaarta ama tacabur oo dhan laftiisa waa qalabka ku jira habka hal abuurka ee Valheim.
Qalabka Qiimaynta Qalabka
Kaabasha Birta ah
Dabcan, cayaartan gudaheeda kuma noolaan karno hub la'aan, waxaan ognahay inay jiraan khataro badan oo ka dhex jira hal-abuurkan. Hab wanaagsan oo lagu barto hubka waa adoo u adeegsanaya qaab konsole ah amarrada soo socda.
Kumaandooska hubka ee Valheim
Waxaan sidoo kale u baahanahay qalab haddii aan dooneyno inaan yeelano qalcad aan laga soo kabsan karin iyo sidoo kale wax kasta oo lagama maarmaan u ah dhisida noocyada kala duwan, waana sababta aan kuugu dhaafeyno liis amarro ah oo aad ku isticmaali karto mid kasta iyo mid kasta qalabka aan ka heli karno ciyaarta.
Amarada Qalabka ee Valheim
Haddii aad raadineyso qalab sixir ah ama waxyaabo kaa caawinaya inaad heer sare gaarto waxaa sidoo kale jira qaar aad ka heli kartid qaab ciyaartan adigoo ku kicinaya habka hal-abuurka ee Valheim.
Sidoo kale waa inaad maskaxda ku haysaa in gaadiidku muhiim u yahay awood u yeelashada inaad ka gudubto khariidada oo dhan, in kasta oo aan mar horeba kaaga tagnay amarka muuqaalka meel kasta oo khariidada ah, sidoo kale waa faa'iido inaad leedahay baabuurta Valheim.
Dhammaan gawaarida Valeim
Mid ka mid ah astaamaha ugu isticmaalka badan ee habka hal-abuurka ee Valheim ayaa ah awooda lagu sameeyo cadow kasta oo ciyaarta ka dhex muuqda. Tan waxaa loo isticmaalaa in lagu tababaro ama lagu siiyo xiisaha ciyaarta.
Amarada Cadawga ee Valheim
Isla qeybtaan waxaan ku heli karnaa Isbaanishka ama matoorrada caanka ah, cunsurradan ayaa ah waxa cadawga ka dhigaya inuu u muuqdo ama dib ugu cusbooneysiiyo ciyaarta qaddar dhammaaday. Tani waa mid ka mid ah xulashooyinka ay tahay inaad isku daydo amarrada qaabka hal-abuurka ee Valheim.
Imtixaanka Khiyaano leh wax kasta oo la furay
Cadawga ayaa dhashay
Amarada Koobka Cadowga
Sidaad aragtay, waxaan kaaga tagaynaa liiste dhammaystiran dhammaan amarrada ciyaarta ee Valheim oo aad ugu adeegsan karto qaab hal abuur leh Xusuusnow inaad marwalba riixdo F5 furaha si aad uqorto amarka.
Haddii aad rabto inaad ka feejignaato warar dheeri ah oo ku saabsan ciyaartan cajiibka ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto annaga Beesha khilaaf. Meesha had iyo jeer laga helo wararka ku saabsan adduunka ciyaaraha fiidiyowga.
Valheim Commandos Sida loo kiciyo habka hal abuurka ee Valheim qaabka konsole ee Valheim khiyaanooyinka valheim
Sidee hackdhagta Tik Tok [SAHAL 3 siyaabood]
Ugu dambeeyay kanaalkayaga Youtube
Qaybta ugu dambaysa